Wax ka ogoow cudurka Lafa-beelka (Osteoporosis) - Aayaha
Heel ultrasound: Baaritaankani wuxuu eegaa lafabeelka. Waxaad u baahan tahay inaad iska saarto kabaha iyo iskaalshooyinka si lagaaga sawiro lafaha cirbaha. Waxaa dhulka la dhigaa sixniyo yaryar oo aad isku taagto. Dhowr daqiiqadood ka dib waxaa lagu siinayaa jawaabta, mana aha wax xanuun leh
Baaritaan cufnaanta lafaha (scan), oo loo yaqaano DEXA – Waxa weeye sawir X-Ray/Raajo ah oo lagu cabbiro dhumucda lafahaaga ee halka ay ku dhammaato lafdhabarta, miskaha amase kuraankurta gacantu.
Baaritaan dhiig – Baaritaankan waxaa lagu sameeyaa oo lagaa qaadayaa dhiig, waxaana lagu baaraa xaaladaha sii kordhinaya inaad lafo beesho.
Cun cunto ay ku badan tahay kaalshiyam amase qaado dawo ahaan kaalshiyam kaabe ah maalin kasta.
 Haddii da’daadu u dhaxayso 19-50 jir, cun 3 inood amase 1000 milligaraam oo kaalshiyam ah maalintii.
 Haddii da’daadu ka wayn tahay 50 jier, cun 4 inood amase 1200 milligaraam oo kaalshiyam ah maalintii.
 Kaalishiyamka waxaa laga helaa caanaha, iyo cuntooyinka ay kaalshiyamku ku badantahay sida cabitaannada iyo heedda badarka iyo qamidiga laga sameeyo ee lagu quraacdo.
 Kaalshiyamka oo aad dawo u qaadataa waxay bannaan tahay markaad cuntada si fiican uga qaadan kari waydo kaalshiyam kugu filan.
 Haka badin intaad qaadanayso ee kaalshiyam ah intii laguu qorey.
 Fiitamiin D ayaad u baahan tahay si aad Kaalshiyam u qaadato.
Is ilaali in culayskaagu noqdo mid fiican. Haddii aad shilis tahay khatar baad ku jirtaa inaad lafo-beesho.
Caadayso socodka, orodka dheesha iyo xarakaad kale 3-4 saacadood toddobaadkii.
Sigaarka jooji cabitaankiisa.
Ilaali oo xadid cabitaanka kafeega iyo cabitaanka kaarboonta leh.
Kala hadal dhakhtarkaaga dawoowinka kaa anfaca inaad lafo beesho.
Waydii dhakhtarkaaga sida laguugu beddeli karo isdaawaynta Istorojiin ay caadadu kaa joogsanayso. ama qanjirada dhalmada lagaa saaro.Istorojiin waxay ka hortegi kartaaa inaad lafo beeshao, hayeeshee waxaa jira khataro ay keeni karto daawayntani. Kala hadal dhakhtarkaaga faa’iidada aad ka helo karto iyo halista ay kugu keeni karto.